Baaq kusocda xukuumada madaxwayne Mustaf. | ogaden24
Baaq kusocda xukuumada madaxwayne Mustaf.
Waxaa sii badanaya dhibaatada soo Jireenka ah iyo caqabadaha ay dhalinyarada shaqa doonka ah kala kulmayaan xafiisyada kala duwan ee dawlada, kuwaasi oo Hanaanka shaqaalaysiinta u mara siyaabo fool xun oo aan dastuuri ahayn Lidna ku ah xuquuqda muwaadinka, Hadaba si dhibaatadaasi ayna u sii socon.
1.waa in xukuumadu baadhitaan kusamaysaa habka shaqaalaysiinta xafiiska iyo habdhaqanka agaasimayaasha iyo shawaalaha gacanta kuhaya Codsiyada shaqada, waana in ogaysiiskasta lagu qoraa luuqada afsoomaaliga, (jigjiga is not Ohio)
2.waa in dib ueegis lagu sameeyaa shuruudaha maalaayacniga ah, waxaan aragnay Diploma laga rabo 10-sano oo khibrad ah siuu khabiir hoose oo degmo u noqdo aduunka meela kamajirto midaasi.
3.waa in dib loo eegaa hanaanka Qiimaynta Cilmiga (evaluation) waayo sax maahan in layidhaahdo somaliga 2.6 dhibcood haysta waxaa booskiisa lasiin highlander 2.9 dalka iyo caalamka meelna kamajirto qof looeego dhibcaha dugsiga sare siuu shaqo uhelo, midakale deegaankeenu awalba ladhibco ma,ahayn dalka intiisa kale.
4.waa in meesha lagasaaraa askartan albaabada agaasinada fadhida eed moodo inay bangi ilaalinayaan, arintani waa midkamida sababaha keenaysa inuu dadku isgaadho oo banaanka lagu cadibmo, waana dhawan xun oo waligiiba deegaankeena kasoojiray.
5. Deegaanka waa layaqaanaa boosaska banaan iyo kuwa aan banaanayn manajiro qof soocodsado boos aan banaanayn marka lkn waxaa muuqata wixii waligeedba jiray ee ahayd in boos qof soo codsaday qofkale loosoo saaro qofkiina banaanka maalinwaliba lagu celiyo arintan waa in si dhakhso ah wax looga qabtaa.
6.waa in ay jiraan shaqsiyaad xuuraama musawa (plain clothe officers) siloo cidhibtiro musuqa.
7.waa in laga ilbaxaa boos riixa dhalinyarada soomaalida ah islamarkaana aysan marna dhicin in xaqooda cidkale lagu xurmeeyo, dasduurka deegaanku kuma qorna axmaari wuxuu kuqoranyahay soomaali,
1. Waa inaysan marna katanaasulin xuquuqda wadaniyadeed iyo tan dastuuriga ah midna,
2. Marna haqarinina hadii aad lakulantaan wax kabaxsan habraaca shaqada bulshadana lawadaaga,
3.haday dhacdo in xuquuqdaada lagu xadgudbo laxidhiidh xafiiska cabashooyinka waxaana muhiima inaadan kacabsan inaad maxkamad la,aado xafiiska aad kacabanayso.
3.kafogaada inaad dhiirigalinsaan musuqa oo aad si gaaban wax kuraadisaan (no shortcuts) kana fogow inaad wax isdaba marin samayso,
Hoos kafiiri Shuruudaha iyo Afka lagu qoray warqad kasoo baxday xafiiska sayniska iyo tignoolojiyada DDS!